Erdogan: Turkigu waa la dagaalami doonaa argagixisada ilaa laga soo afjarayo - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldErdogan: Turkigu waa la dagaalami doonaa argagixisada ilaa laga soo afjarayo
January 1, 2017 Abdi Omar Bile World 0
Istanbul-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta oo Sabti ah sheegay in Turkiga uu sii wadi doono la dagaalanka argagixisada iyo kuwa taageera “ilaa iyo laga soo afjarayo.”, sida ay ku warantay wakaalada wararka Turkiga ee Anadolu.
Erdogan ayaa bayaan ku sheegay kadib markii weerar argagixiso uu ka dhacay xalay oo Axad ahayd baar lagu caweeyo oo kuyaala magaalada Istanbul, kaasoo lagu dilay ugu yaraan 39 qof oo uu kamidyahay askari booliis ah, waxaa kale oo ku dhaawacmay 69 qof oo kale.
Madaxweyne Erdogan ayaa sheegay weerarka axmaqnimada ah ee ka dhacay Istanbul in uu si cad u muujinayo in argagixisadu aysan kala duwanayn balse ujeedadeedu tahay waxyeelayn iyo dilid.
Ugu dambayna, Madaxweyne Erdogan ayaa tacsi u diray muwaadiniintii iyo ajaaniibtii lagu dilay weerarka wuxuuna u rajeeyay in ay si dhaqso ah ku bogsoodaan kuwii ku dhaawacmay weerarka.
Ma jirto koox sheegatay masuuliyada weerarkaas, balse tifaftiraha wararka caalamka ee warsidaha Puntland Mirror Cabdiraxmaan Cabdullaahi Shiikh ahna falaanqeeye ku xeel-dheer diblomaasiyada dunida ayaa sheegaya in looga shaki qabo weerarkaas in ay geysatay kooxda ISIS kuwaasoo weeraro hore ka geystay gudaha dalka Turkiga.
Baydhabo-(Puntland Mirror) Ugu yaraan afar katirsan maleeshiyada Al-Shabaab ayaa lagu dilay weerar ka dhacay deegaanka Deynuunay ee gobolka Bay maanta oo Sabti ah, sida ay sheegeen ilo-wareedyo dhanka ammaanka ah. Weerarka ayaa yimid kadib markii [...]